मांसपेशी परिभाषा जोडले कम छ, र केही कारण सक्दैन, त्यसैले कम लागि धेरै आराम calves। भावना, धेरै फरक हुन सक्छ, तर कुनै पनि मामला मा, तिनीहरूले धेरै अप्रिय छन्। मदतको लागि हतार गर्न, वा तपाईँले आफ्नै समस्या सामना गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो अवस्थामा आवश्यक छ कि छैन भनेर। र किन calves कम?
अक्सर मानिसहरू भन्ने गुनासो खुट्टा ल्याउँछ राति यो। सायद, कारण एक परिणाम, को खुट्टा मा एक भारी लोड रूपमा व्यस्त तालिका, स्थिर लोड मा खोजे र, हुनुपर्छ। तपाईं आफ्नो खुट्टा मा सबै दिन खर्च भने, जूता सबैभन्दा सहज थिए हेरचाह गर्न निश्चित हुन। अनुचित जूता, असहज संकीर्ण, र एक एडी मा - यो पहिलो कारक जो को calves कम फलस्वरूप छ। के यस्तै घटना निद्रामा disturbs भने? , एक आराम प्रभाव संग एक खुट्टा स्नान प्रयोग शावर र मालिश कन्ट्रास्ट।
किन calves ल्याउँछ तपाईं चिसो पानी मा हुँदा? चिसो मांसपेशीमा को प्रभाव अन्तर्गत डर गर्न थाल्छन्। पानी मा Stepping, हामी तिनीहरूलाई गति मा दिन र यसलाई थप बोझ दिन। यहाँ संयोजन किन चिसो पानी मा विसर्जन बेला calves कम पहिलो बेचैनी र तुरुन्तै स्पष्ट हुँदा पनि डराउँछन्। सामान्यतया यी परिस्थितिमा, तपाईं स्थिति परिवर्तन र जोडदार मालिश टिप्पणी मांसपेशी क्षेत्र लागू गरेर दुखाइ राहत गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो घटना को रोकथाम लागि योग वा stretching सिफारिश गरिन्छ। यो रगत प्रवाह सुधार, मांसपेशिहरु आराम मदत र टोन गर्न रगत पोत पर्खाल कारण हुनेछ।
अक्सर यो गर्भावस्था को अन्तिम चरणमा महिला मा calves ल्याउँछ। कारण ट्रेस तत्व र भिटामिन को कमी मा खोजे गर्नुपर्छ। साथै, गर्भावस्था को अन्त मा यो हिंड्न विशेष गाह्रो छ। आफ्नो खुट्टा थप आराम र हरेक दिन दुग्ध उत्पादन, पनीर र घरेलु पनिर खान निश्चित हुन। आफ्नो डाक्टर भिटामिन परिसर र अन्य सुविधा थप सेवन सिफारिस हुन सक्छ, तर आफ्नै तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न आफ्नो सिफारिस बिना हुँदैन।
किन calves कम तपाईंलाई थाहा छैन भने, तपाईँको मेनु ध्यान पक्का हुन, समस्या किनभने यसको असंतुलन को उठ्दा। डेयरी उत्पादन को आहार पर्याप्त मात्रा सधैं वर्तमान, फल र जडीबुटी हुनुपर्छ। कहिलेकाहीं कारण उच्च रक्तचाप मा खोजे हुनुपर्छ। यसको लक्षण को normalization पछि गायब। यो घटना बारम्बार हुन्छ भने, व्यक्ति सम्पर्क र आवश्यक परीक्षण फर्कन निश्चित हुन। यस चिकित्सक नसाहरु अल्ट्रासाउंड स्क्यानिङ र डपलर सल्लाह दिन्छन् सक्छ। सधैं, तर अझै पनि सम्भव, कि जस्तै रोगहरु को एक लक्षण छ जिगर, को cirrhosis मस्तिष्क वा थाइरोइड विकृति, मधुमेह, वा atherosclerosis।
तर अक्सर यो वजन, हाम्रो शरीर पोटासियम वा म्याग्नेसियम, निर्जलीकरण, तनाव वा अधिक-भोल्टेज ड्राइव calves मा कमी हुनुको, थकान कारण हो। यस्तो अवस्थामा के गर्ने? त्यहाँ चिकित्सा धेरै छन् anticonvulsants, जो फार्मेसी मा खरिद गर्न सकिन्छ। उपचार सधैं उहाँले प्राप्त छैन हुनेछ जो बिना क्याल्सियम को र भिटामिन डी को प्रयोग, साथ, व्यायाम र मालिश प्रयोग गर्न निश्चित हुन त, जटिल हुनुपर्छ।
यस्तो अवस्थामा सधैं रूपमा सहायता लोक चिकित्सा गर्न आउँछ। प्राकृतिक देखि बनाउँने चिया वृक्ष फूल, सन्टी तन्तु र वसन्त adonis। राम्रो मद्दत ताजा कागतीको रस। हरेक दिन तिनीहरूलाई अन्डा RUB, बिहान र सधैं ओछ्यानमा अघि। चिकित्सकहरु विशेष तोरी तेल प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छौं। यो एक व्यस्त ठाउँ र दुखाइ को तीव्र लोप आराम गर्न मद्दत गर्छ। आफैलाई ध्यान एक बिट, अधिक बाँकी दिन, तपाईं छोड्न आहार र बेचैनी पालना गर्नुहोस्।
मृगौला carbuncle: कारण, लक्षण, निदान, उपचार
को व्यवहार thrush: परम्परागत र लोक चिकित्सा
बिरुवा खोकी कसरी लिन। बिरुवा खोकी बच्चा
कुकुर मास्को ड्रैगन: मानक, मूल, मूल्य को इतिहास
Barnacles: फोटो, जीवन शैली
"मेनोपुर": निर्देशन, मूल्य, समीक्षा, वर्णन, खुट्टाहरू
र रक्तचाप lowers?
परिष्कृत जाम feijoa: क्लासिक नुस्खा, साथै विभिन्न additives
स्वादिष्ट व्यञ्जनहरु: कीमा बनाएको मासु व्यञ्जन